Ụbọchị My Pet » G-Abù Eziokwu na Echiche Ụgha
Ịgbasi Mgba Ike chọta gị G-ntụpọ? Ọ bụ nnukwu oge na ị kwụsị ịchụso mirage ma lekwasị anya na inwe a ike mmekọahụ ndụ na onye gị na.
E nwere ọtụtụ nde ndị inyom onye na ọchịchọ maka ihe omimi G-ntụpọ orgasms mgbe biri. Women na-atụsi anya nke a n'ụdị orgasm n'agbanyeghị enwe zuru okè clitoral orgasms.
Ọ bụ eziokwu na mmamiri orgasms ndị na-emekarị ọzọ ufiop karịa orgasms-enweta site clitoral mkpali; Otú ọ dị, na orgasms nwere ndị ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ndị inyom na-clitoral na ọdịdị.
Ezie na e nwere ihe ọjọọ na-enwe orgasms naanị site na clitoral mkpali, na myths metụtara na G-ntụpọ utịp ke ala mgbagwoju na belata mmekọahụ ùgwù onwe onye na ndị inyom bụ ndị na-nweta ihe ọtụtụ na-ekwu banyere G-ntụpọ orgasm. The funniest ihe n'ebe a bụ na-eme nnyocha ka na-adịghị obi ike banyere ịdị adị nke G-ntụpọ.
G-ntụpọ ma ọ bụ Grafenberg ntụpọ nwetara aha ya site German dibịa Dr. Ernst Grafenberg, onye mbụ na-ekwu banyere nke a erotic mpaghara n'ime ikpu, nso urethra ụzọ azụ ke 1950s. Karịrị 60 afọ agafewo kemgbe aro e mere site German dọkịta, ma e nwere bụ ka ọ dịghị ihe àmà doro anya nke G-ntụpọ adị, nke manyere ọtụtụ kwere na ọ bụ naanị akụkọ ifo.
A na-adịbeghị anya na-amụ bipụtara na ike na magazin Clinical Mmebe yiri ka akpatre Lee ji ah echiche ụgha gbara ya gburugburu na G-ntụpọ. Dị ka ọmụmụ, echiche nke nkerisi orgasms n'ime G-ntụpọ-kpaliri, mmamiri na clitoral bụ nnọọ na-ezighị ezi. Researchers abuana ke ọmụmụ kwuru na naanị okwu na otu kwesịrị iji n'ihi na ụdị orgasms ndị inyom bụ “nwanyi orgasm”.
N'oge kwuru ọmụmụ, sexologists wee mara na “esịtidem clitoris”, nke ụbọchị e kweere na ịkpalite mmamiri orgasms, bụ naanị akụkọ ifo. Clitoris bụ ihe mpụga ngwa na arụ ọrụ dị mkpa na-enye ndị inyom nnukwu obi ụtọ site orgasm; ọ bụ ya.
Ị ga-nụrụ ndị na-ekwu na ụbụrụ bụ nnukwu mmekọahụ ngwa ụmụ mmadụ nwere. Nke a ọhụrụ ọmụmụ a na-atụ aro ihe yiri. Dị ka ọmụmụ, nwanyi orgasms ndị na-emekarị echiche.
Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na ndị inyom afọ ojuju nke mmekọahụ na-fọrọ nke nta mgbe dabeere na mmamiri orgasm. Nke a dị mma; ma ndị inyom ga-aghọta na n'ihi nke inwe ihe mgbagwoju anya na ozu, ha nwere ike na-enweghị orgasms n'ụzọ dị nnọọ mfe dị ka ndị ikom. Ọzọkwa, ha kwesịrị idehedei usụhọde nanị n'ihi na ha na-akawanye njọ iji nweta orgasm dị nnọọ site penetration.
Ee, ị ga-izute ndị inyom bụ ndị ga-asị na ha na-anọgide na-enwe orgasms mgbe ha G-ntụpọ Nwela kụrụ a ugboro ole na ole. Ha wee ghara ụgha; Otú ọ dị, ọkachamara kweere ihe inyom aghọta dị ka G-ntụpọ mkpali bụ isi mpụga mkpali ha na-ata n'amaghị ama.
Ị ga-eche ihe mere na ị na-eche otu ihe ahụ. Ugbu a, na nke ahụ bụ a akpan mbụme; kacha nkọwa ga eleghị anya dị iche iche ozu-eme dị iche iche ka otu mkpali.
E nwere ike ịbụ ihe ndị ọkà mmụta sayensị nkọwa, ma gịnị mere ka ihe ndị ọzọ mgbagwoju. Ndị ọzọ ị ga na-eche na ala gị ga-abụ afọ ojuju quotient; otú, meda na-enwe mmekọahụ.